Amaro cusub oo la dul dhigay dadka ku ganacsada hareeraha Zoobe | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Amaro cusub oo la dul dhigay dadka ku ganacsada hareeraha Zoobe
Amaro cusub oo la dul dhigay dadka ku ganacsada hareeraha Zoobe
Maamulka degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ayaa amaro cusub dul dhigay ganacsatada yar yar ee ku ganacsata hareeraha Isgoyska Soobe ee Muqdisho.
Amarada maamulka degmada Wadajir ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah inaan Shidaal lagu iibin karin hareeraha laamiga Zoobe, inaan Qaadka lagu iibin karin dhinacyada laamiga iyo ganacsiyada yar yar ee kale.
Maamulka ayaa sheegay in ganacsatada looga baahan yahay iney u hogaansamaan amarka Maamulka ka soo baxay.
Guddoomiyaha Maamulka degmada Wadajir Sheekh Cumar C/laahi Xasan ayaa sheegay qaraxii ka dhacay Isgoyska Soobe saameynta ugu badan inuu ku yeeshay dadka ganacsatada yar yar ku lahaa Isgoyska Soobe.
Waxa uu tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in dadka la badbaadiyo islamarkaana laga fogeeyo sida uu sheegay Isgoysyada.
Guddoomiyaha Maamulka degmada Wadajir Sheekh Cumar C/llaahi Xasan ayaa sheegay in ay qorshe gaar ah u sameeyeen dadka ganacsatada yar yar ku lahaa Isgoyska Soobe marka laga raro Isgoyskaasi si uusan gaabis u galin howlahooda ganacsi.
Qaraxiika dhacay Zoobe 14-kii bishan oo ay ku dhinteen boqolaal dad ah ayaa saameynta ugu badan wuxuu ku yeeshay dadka ganacsiyada yar yar ku lahaa hareeraha laamiga, kuwaasi oo u badnaa dad danyar ah.